Xarunta Bangiga Salaam Somali Bank ee magaalada cadaado oo laga bixiyay lacago maalgalin ah. - Home somali news leader
Home NEWS Xarunta Bangiga Salaam Somali Bank ee magaalada cadaado oo laga bixiyay lacago...
Xarunta Salaam Somali Bank ee magaalada Cadaado ayaa maanta laga bixiyay barnaamij Qardul Xasan (free micro finance) oo ah lacago la siinayo ganacsatada yar yare ee ku dhaqan magaalada Cadaado.
Munaasabad ka dhacday xarunta bangiga ee magaalada cadaado ayaa lagu gudoonsiiyay ganacsatada deegaanka lacagtaas maalgelinta ah.
Dadkii ka faa’iidaystay barnaamijkaan qardul xasan (free micro finance ) ayaa uga mahad celiyay maamulka iyo shaqaalaha bangiga salaam Somali bank waxayna sheegeen in ay tahay talaabo wanaagsan oo ku dayasho mudan waxayna sidoo kale sheegeen iney aad ugu farxeen fursadan maalgelineed ee uu bangiga siiyey.
Qardul xasan waa barnaamij dhowrkii bilood mar uu bangiga bixin doono waana mid loogu tala galay in laga bixiyo dhamaan xarumaha bangiga ee gobolada iyo magaalooyinka dalka waxaana loogu tala galay in lagu kobciyo laguna dhiiri geliyo ganacsatada soo koreysa.
Hore ayuu bangiga sidan oo kale ugu bixiyey xarumo dhowr ah ,waxana Maamulka Bangiga Salaam Somali bank uu sheegay in ay sii wadi doonaan barnaamijkaan waxaana dhawaan laga bixin doonaa dhamaan xarumaha harsan ee bangiga .
Ujeedada ugu muhiimsan uu banigiga u bixinaayo lacagahan ayaa ah in kor loo qaado wax soo saarka ganacsatada soo koreysa laguna dhiiri geliyo ganacsigooda.
Previous article‘Face It’: Debbie Harry’s Memories of Sex, Drugs, David Bowie and the Blondie Mask
Next articleShariif Xasan;”Doorasho Hal Wareeg waa diidanahay xalna kuma imanayo.”